एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकीकरणमा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नै अनुपस्थित, यस्तो छ कारण !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकीकरणमा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नै अनुपस्थित, यस्तो छ कारण !
काठमाडौं – एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकीकरण भएका बेला एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल अनुपस्थित रहेका छन् ।
विहीबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित पार्टी एकीकरण कार्यक्रममा खनाललाई नदेखेपछि धेरै नेता कार्यकर्ताले आशंका गरेका थिए । कम्युनिष्ट पार्टीका लागि विहीवार ऐतिहासिक दिन बनेको छ । लामो समयदेखि राजनीतिको मूलधारमा रहेका ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र एकाकार भए । बिहानैदेखि दुवै पार्टीका नेताहरूलाई भ्याइनभ्याइ थियो ।
दुवै पार्टीका वरिष्ठदेखि कनिष्ठ नेता र कार्यकर्तासमेत प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उपस्थित थिए ।
वरिष्ठ नेता खनाल बुधबार चीन गएका कारण पार्टी एकता कार्यक्रममा सहभागी नभएका हुन् । खनाल थाइराइडको शल्यक्रिया गर्न चीन प्रस्थान गरेका थिए ।
पार्टी एकीकरणको तयारी तीब्र अगाडि बढिरहँदा उनी भने त्यसबारे धेरै जानकार थिएनन् । दुई पार्टी साझा घोषणापत्रबाट चुनावमा जाने यसअघिको ऐतिहासिक निर्णय हुँदा पनि उनी वेखबर थिए ।
चीनमा रहेपनि खनाल नयाँ गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ९ जना शीर्षस्थमा परेका छन् । पार्टीको हाइ कमाण्डमा उनको उपस्थिति छ । केपी ओली, पुष्पकमल दाहालपछि तेस्रो स्थानमा खनाल रहनेछन् । खनाल कार्यक्रममा अनुपस्थित रहेकोमा ओली र दाहालले विभिन्न आशंका गरेका थिए ।